IPL 2020 : अम्बाती रायुडू कहिले मैदानमा उत्रिन्छन ? धोनीले गरे खुलासा ! » Onlycricnepal
इन्डियन प्रिमियर लिगको १३ औं सिजन मा चेन्नई सुपर किंग्सले उत्कृष्ट क्रिकेटरहरू टिममा नभएको कारण समस्याको सामना गर्दै छ । सीएसके स्टारका ब्याट्सम्यान सुरेश रैना १३ औं सिजन सुरु हुनुभन्दा केही दिन अघि व्यक्तिगत कारणले आईपीएलबाट पछि हटे। ठिक त्यहा सिजन शुरू भएपछि टोलीका प्रमुख ब्याट्सम्यान अम्बाती रायुडू चोटिल को कारण अन्तिम दुई खेलमा टीमबाट बाहिरिएका छन्।
यो पनि पढ्नुहोला : सन्दीपआवद्ध दिल्ली आइपीएलको शीर्ष स्थानमा, यस्तो छ अरू टिमको स्थान (सूचीसहित)
रायुडूको आधारमा चेन्नई सुपर किंग्सले इन्डियन प्रिमियर लिगको १३औं सिजनको उद्घाटन खेलमा डिफेन्डि च्याम्पियन मुम्बई इन्डियनलाई ५ विकेटले हराए को थियो । यद्यपि यस सिजनाकै शुरु बाट रायुडू चोटिल भएको कारण अगिको दुइ म्याच खेल्न सकेनन। यद्यपि टोलीका कप्तान धोनीले अम्बाती रायुडूको अर्को खेलमा फर्किने आशा गरेका छन्, जो पछिल्ला २ बर्षमा चेन्नई टीमको महत्वपूर्ण हिस्सा थिए।
धोनीले भने, “रायुडू अर्को खेल खेल्नु पर्छ। उसले हामीलाई एक अतिरिक्त बलरलाइ खेलाउन प्रयोग गर्ने मौका दिनेछ । त्यहाँ हामी केहि चीजहरू सोच्न सक्छौं। ”
अम्बाती रायुडूले मुम्बई बिरुद्ध पहिलो खेलमा -१ रनको जितको खेल खेलेका कारण चेन्नई टीमले मुम्बई बिरूद्ध लगातार हारको श्रृंखला तोड्न सफल भएको थियो ।
यो पनि पढ्नुहोला : IPL 2020, CSK vs DC : दिल्ली संग को हारपछि धोनीले गरे हार्नु पछाडीको ठुलो खुलासा ?
यो भन्दा पहिले धोनीले दिल्लीको बिरूद्ध पराजित हुनुमा ब्याटिङ्ग क्रमलाई दोष दिए का थिए । खेलपछि धोनीले भने, “मलाई लाग्दैन कि यो हाम्रो लागि राम्रो खेल हो। विकेट ढिलो भएको थियो। त्यहाँ कुनै शीत पनि थिएन। तर मलाई लाग्छ हाम्रो ब्याटिङ्ग अडर मा कमि छ। हामीले यसको पत्ता लगाउनु पर्छ। अर्को सात दिनको ब्रेकले हामीलाई यसको बारेमा जान्न को लागि मौका दिनेछ। ”
उल्लेखनीय कुरा के छ भने चेन्नईले आईपीएल २०२० मा सुपर किंग्सको तीन खेलमा दुई हारको सामना गर्नुपर्‍यो। उनले पहिलो खेलमा मुम्बई इन्डियनलाई पराजित गरेका थिए तर त्यसपछि लगातार राजस्थान रोयल्स र दिल्ली क्यापिटल बिरुद्ध पराजयको सामना गर्नु पर्‍यो।
यो पनि पढ्नुहोला : आइपीएल : पहिलो जितको खोजीमा हैदरावाद र कोलकाता, यस्तो छ सम्भावित प्लेइङ-११
कम उमेरमा उपाधि दिलाउने कप्तान, धोनीकाे रेकर्ड रोहितले तोडेका थिए!
६ चैत्र २०७६, बिहीबार ११:३८
छोरीहरूले वार्नरलाई पठाए एक ‘विशेष सन्देश’ !
२१ बैशाख २०७८, मंगलवार १९:५०
मुम्बईविरुद्ध दिल्लीले टस जित्यो
२५ आश्विन २०७७, आईतवार १९:२४
पुरस्कार राशी कटौती गर्ने आइपीएलको निर्णयमा फ्रेन्चाइज टोलीको आपत्ति
Pingback: आइपीएल २०२० : पूर्व भारतीय क्रिकेटरले गरे विराटमाथि हमला, कप्तानमाथि उठाए यस्तो प्रश्न! » Onlycricnepal
Pingback: आईपीएल २०२०: यस सिजन आईपीएलमा बेन स्टोक्स खेल्ने सम्भावना कति छ ? इंग्ल्यान्ड को पुर्व खेलाडीले द